सीमा क्षेत्रको बगर संरक्षणमा जुटे स्थानीयवासी - नेपालबहस
| १०:२२:५१ मा प्रकाशित
२७ भदौ, टीकापुर । कैलालीको टीकापुर–७ स्थित बगरमा परिणत भएको जमीन संरक्षणमा स्थानीय जुटेका छन् । वर्षौदेखि नदी कटान र पटान भएर खेती गर्न नसकिएको जमीनलाई स्थानीयले सामुदायिक वनका रुपमा विकास गर्न थालेका छन् ।
प्रस्तावित सामुदायिक वनका अध्यक्ष भिउराज साउदले आयोजनासँग बिरुवा माग गरेर वृक्षरोपण गरेको बताए। ‘‘हामीले जमीन संरक्षणका लागि सामुदायिक वनका रुपमा विकास गर्ने योजना बनायौँ’’, साउदले भने, ‘‘ नदी कटानले हैरान भएका स्थानीय वृक्षारोपण भए नदी कटान न्यूनीकरण हुने आशामा छन् ।’’
साथै सामुदायिक रुपमा प्रयोग विहीन जमीन प्रयोग गरेमा स्थानीयलाई आवश्यक घाँस दाउरा जुटाउन समेत सहयोग पुग्ने संरक्षणकर्मी जयप्रसाद ढुङ्गाना बताउछन । ‘‘मोहना र पथरैया नदीको दोभानमा डल्फिन पाइन्छ । त्यस क्षेत्रलाई डल्फिन क्षेत्रका रुपमा विकास गरिरहेका छौँ’’, जयप्रसाद भन्छन ।
युवतीको बलात्कारपछि विभत्स हत्या, शरीर खोलामा फालेर टाउको गायब ! ४ मिनेट पहिले
मास्क सिलाउन व्यस्त महिला १४ मिनेट पहिले
कथा: कर्णकाे बयान २३ मिनेट पहिले
कोरोनाले शिक्षण अस्पतालकी कर्मचारीको मृत्यु, २०० स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित ! २८ मिनेट पहिले